Soo -saarayaasha Bacaha Jumlada Hawada leh Warshadda Bacaha Jumlada ee Shiinaha oo Hawo -siisay
Bacaha baradhada ee la sifeeyey waxay soo saaraan jawi ku habboon dhammaan noocyada alaabta oo u baahan socodka hawada ee marada galay bacda. Si loogu kaydiyo badbaado iyo gaadiid badbaado leh, bacahaani waxay ka hortegi karaan alaabada inay xumaadaan qoyaan iyo caaryo. Dhinaca kale, boorsooyinkan ayaa ku habboon in la maareeyo, kaydinta iyo gaadiidka.
Boorsada Jumlada Hawada ee HV62
Bacaha waawayn ee hawo leh ayaa laga sameeyey bikrad PP, qaarkoodna waxaa lagu daray shabag. Waxay caan ku yihiin beeraha si loo kaydiyo ama loo beddelo khudaarta maadaama ay kor u qaadi karaan socodka hawada iyo neefsashada alaabta.
Waxaan sida caadiga ah haysannaa dhowr kun oo ka mid ah Bacaha Jumlada ee La Faafiyey. Boorsada Jumlada ah ee Hawada La Hayo ayaa u oggolaanaysa hawada inay gasho badeecada lagu sido bacda.